Keenida in maroojin cusub si aad u ciyaarta si joogto ah blackjack waxaa Hi Lo blackjack. add-on Tani feature kuu ogolaanaysaa inaad soo duuduubo on qiimaha kaarka labaad ee lagu macaamiloodeen ganacsaduhu. Waxaad sidoo kale waxaa laga yaabaa in soo duuduubo in ay ka qiima sare ama qiime hoose ee kaadhka ugu horeysay. Iyada oo taasi ma saamayn ciyaarta dhabta ah, waxaa ku darayaa in on guuleystayna oo uu saameyn weyn ku ciyaarta ee RTP sidoo.
About Developer ee Hi Lo blackjack
Developed by NYX-Suurogal ah, Hi Lo blackjack waa sabab u ah iskaashi ee labada shirkadood ciyaarta soo koraya. Labada ciyaaryahan ayaa isu yimid bishii Febraayo 2015 ayaa bixinta ugu fiican kulan casino mobile tan iyo markaas.
Hi Lo blackjack waa kulanka caadiga ah ee blackjack la maroojin a soo dhaweeyay. Ma jiraan wax dhib ah oo ku saabsan this waa dar-on. The feature bet Hi Bal eeg si fudud ku darayaa xiiso leh ciyaarta. Iyadoo caadiga ah lix tu kaararka iyo khamaar ah, ciyaarta tagaa on sida aad jeclaan lahaa inaan ogaado. Dooro chips ah ku xiran tahay qiimaha bet aad rabto in aad meel, iyo sidoo kale khamaar ah ee aad dooneyso in aad u ciyaaro. Marka sameeyey, dhacay button heshiiska si ay u bilaabaan ciyaarta.
Hi Bal eeg waa mid ka mid ah khamaar aad u ciyaaro inta lagu jiro blackjack. Halkan, ciyaaryahanka uu helo fursad uu ku sharad on qiimaha kaarka labaad oo waxaa loo qeybin doonaa by dealer ka dib markii kaarka marka hore la dhigay meel miiska ku. Hadda, ciyaaryahanka sidoo kale waxa uu leeyahay in la doorto sare ama hooseeyo, in uu yahay, aad leedahay si aad u maleynayaa in kaarka labaad waxay noqon doontaa mid ah ama qiime sare ka hoosaysiisay card ugu horeysay. Haddii aad si sax ah u maleynayaa, markaas waa inaad lacag u yeelay isla markiiba. marxalada kale ayaa ku guuleystay waa marka tirada guud ee 21 waxaa lagu gaarayaa in kaarka labaad laftiisa. Ka murugeeysan dib A dhacdaa haddii kaarka kowaad wuxuu ahaa Ace ah, oo kii labaadna wuxuu sidoo kale u muuqda in Ace ah. Ciyaaryahanka lumin doonaa bet haddii kaarka labaad waa Ace ah halka mid ka mid ah marka hore ma aha, ama haddii malee waa sax ahayn.
Marka bet Hi Bal eeg waa ka badan, ciyaarta si joogto ah dib blackjack. Helitaanka wadar ahaan 21 ama ku dhow in ay tahay ujeedada ka ciyaarta.
Iyadoo RTP of 99.92%, Hi Lo blackjack waa version cajiib ah oo blackjack caadiga ah. Haddii aad raadinayso qaar ka mid xiiso leh oo dheeraad ah in aad ciyaarta casino jecel, ka dibna ay tani tahay ciyaarta xaq in ay maal-.